IMovistar + Lite: yonke into ekufuneka uyazi | Iindaba zeGajethi
IMovistar + Lite: yonke into ekufuneka uyazi
Umabonwakude, njengoko besisazi njalo ngokwesiko, kuye kwanyanzeleka ukuba atshintshe ukuze akwazi ukuziqhelanisa nokukhetha, kunye nenxalenye yeemfuno zabasebenzisi abasebenzisa umxholo. Ngokuqinisekileyo kwindawo esondele kuyo, sihlangana nabantu abathi Ungene kwisivumelwano senkonzo yevidiyo ukuze ukwazi ukusebenzisa le nto uyifunayo, xa ufuna nalapho ufuna khona.
Iya isiba yinto eqhelekileyo ukubona indlela kumabonwakude wendabuko abasinika ngayo iimuvi okanye uthotho ngaphandle kwazo naziphi na izibhengezo, kwaye ukuba bayakwenza oko, basixelela ixesha abaya kuba nalo, nangona kunqabile ukuba benze njalo. Intuthuzelo ebonelelwa yinkonzo yevidiyo eshukumayo ayinakufumaneka kumabonwakude. IMovistar + Lite ijoyina izibonelelo esele zikho ezivela kwiNetflix, HBO kunye neAmazon Prime Video. Apha siyakubonisa yonke into ofuna ukuyifumana malunga neMovistar + Lite.
1 Yintoni iMovistar + Lite
2 Undinika ntoni uMovistar + Lite
3 Ndingayibukela ibhola ekwiMovistar + Lite?
4 Ngaba ibandakanya iNetflix okanye iHBO?
5 Yimalini ukubalwa kweMovistar + Lite?
6 Iphi iMovistar + Lite ekhoyo
7 Apho ungabona khona iMovistar + Lite
8 Ndingakhuphela umxholo eMovistar + Lite
9 Nguwuphi umgangatho uMovistar + Lite abonelela ngawo
10 IMovistar + Lite kufanelekile
Yintoni iMovistar + Lite
IMovistar + yinkonzo ye-intanethi kamabonwakude ethi iMovistar ibonelele kubo bonke abathengi bayo abenze isivumelwano sephakheji ye-intanethi kunye nomnxeba, iphakheji eyonyusa ixabiso lenkonzo kwaye yenza isithembiso salo mqhubi sesona sibiza kakhulu kwintengiso.
Ukuzama ukufikelela kwinani elikhulu labasebenzisi, iMovistar ibonisile IMovistar + Lite, uguqulelo oluncitshisiweyo lweMovistar + (njengoko igama libonisa) kodwa ngokungafaniyo noku, iyafumaneka kuye nawuphi na umsebenzisi ongenguye umthengi weMovistar.
Undinika ntoni uMovistar + Lite
Umxholo wokuqala esinayo eMovistar + Kuyafana nesifumana eMovistar + kwaye phakathi kwazo sifumana amajelo # 0, iMovistar Series, Seriesmanía, Fox, TNT, Comedy Central, AMC kunye nejelo lezemidlalo #Masihambe, apho singonwabela khona iminyhadala yezemidlalo esinikwa leli qonga, kodwa apho kungafumaneki iligi kunye neChampions League.
Ukongeza kule mijelo, sinakho a ikhathalogu ebandakanya uthotho lwe-300, iinkqubo ezingama-60 kunye neefilimu ezingama-270 kwimfuno, apho sifumana imveliso efanayo yoqobo efumanekayo eMovistar + njengeLa Peste, iEl Embarcadero, iLa Vida Perfecta ...
Ndingayibukela ibhola ekwiMovistar + Lite?
Hayi. Izivumelwano zeligi yaseSpain kunye neChampions banexabiso eliphezulu kakhulu Ngokubhekiselele kwi-Movistar yokuyinikela ngentlawulo ye-8 ye-euro ngenyanga. Ukhuphiswano olwenziweyo olwenziwa yiMovistar + Lite kukuba:
I-Tennis: iWimbledon, iMasters 1000 kunye ne-ATP 500
IsiNgesi kunye neJamani League
NFL kunye neSuperBowl
Izizwe ezi-6, ubuNtshatsheli boMbhoxo kunye neMidlalo emi-7 kuMbhoxo
I-Diamond League yeembaleki
Ukongeza kwiinkqubo zemidlalo ezifumaneka nge #Masihambe njengengxelo kaRobinson, uMhla emva, Isizukulwana seNBA ...
Ngaba ibandakanya iNetflix okanye iHBO?
Ngaphandle kwento yokuba omabini la maqonga afikelele kwizivumelwano ezithile, umxholo ofumaneka kwiNetflix uya kuqhubeka ukubakho kuphela kwiNetflix, njengoko kuya kuba njalo ngeHBO. Nangona kunjalo, eMovistar + Lite siya fumana umxholo weHBO NjengeMidlalo yeZihlalo zobukhosi uthotho lwezihloko kunye nezihloko ezinje ngeMad Men, iorenji nguMnyama oMtsha, iGazi lokwenyani ...
Yimalini ukubalwa kweMovistar + Lite?
IMovistar + Lite inexabiso nge-8 euro ngenyanga Kwaye ikwabandakanya umnxeba, esinokuthi siwusebenzise okanye hayi, ngeefowuni zasimahla ezingenaxabiso ngeendleko zokusekwa kweefowuni ezingama-40 iisenti kunye neendleko zokuthumela iSMS yeesenti ezingama-30.
Njengayo nayiphi na inkonzo yevidiyo, singarhoxa nangaliphi na ixesha, kuba akukho xesha lokusisigxina, ngokungathi sinokufumana nakweyiphi na iphakheji yeMovistar apho iMovistar + ifakiwe. IMovistar + Lite isivumela ukuba sivavanye inkonzo inyanga e-1 simahla, ukubona ukuba umxholo osinika wona ulungele iimfuno zethu okanye hayi.
Iphi iMovistar + Lite ekhoyo
Okwangoku, ngelixa iMovistar ixoxa ngamalungelo okusasaza umxholo kwamanye amazwe, onke Umxholo weMovistar + Lite uyafumaneka eSpain. Ukuba uhamba eYurophu, uya kukwazi ukufikelela kuwo wonke umxholo okhoyo kule nkonzo ngaphandle kwengxaki, nangona ungeke ukwazi ukuyiqesha kwelinye ilizwe.
Apho ungabona khona iMovistar + Lite
Njengenkonzo yevidiyo esasazekayo, iMovistar isinika iindlela ezahlukeneyo zokuba sikwazi ukusebenzisa umxholo kwiqonga lalo elitsha, sisicelo esinye esisetyenziswa ngoku ngabo bonke abasebenzisi beMovistar +, ke awudingi idikhowuda okanye nantoni na enjalo.
Isicelo seMovistar + siyafumaneka:
IiTV zeSmart ezivela kwi-Samsung kunye ne-LG
IiTV ezilawulwa yi-Android TV (iSony, iPhilips, iPanasonic)
Izixhobo zeTV ze-Android (iNvidia Shield, iXiaomi Mi Box…)
Izixhobo ze-Android, i-iPhone, i-iPad kunye ne-Amazon Fire TV Stick
Isicelo seMovistar + ASIKUFUMANEKI ukulungiselela:
Ngelishwa okwangoku kunye kubonakala ngathi ayisiyiyo inketho yekamva, Abasebenzisi beekhonsoli ezinjengePlayStation 4 abayi kuba nakho ukusebenzisa iingcebiso zabo ukusebenzisa umxholo waleqonga. Abasebenzisi beMac bagwetyelwe ukusebenzisa nasiphi na isikhangeli ngaphandle kweSafari ukuze bakwazi ukufikelela kule nkonzo kunye nabo baneChromecast, ubuncinci ekuqaleni kodwa babhengeza olu khetho phantse kunyaka ophelileyo kwaye okwangoku alukafumaneki. Ukuba asinaso isixhobo esiseduze, sinokukhetha ukusebenzisa indlela ye- iwebhusayithi ukufikelela kuwo wonke umxholo onikwe thina.
Umthuthukisi: UMovistar España
Ndingakhuphela umxholo eMovistar + Lite
Njengayo nayiphi na enye inkonzo yokuzihlonela ye-VOD kwaye ifuna ukubonelela ngeenkonzo kubathengi bayo, iMovistar + Lite ivumela ukuba sikhuphele umxholo ukuba siwusebenzise ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi kuzo zombini izixhobo ze-iOS kunye neze-Android njengakumacwecwe, nangona sinokwenza kuphela kuthotho nakwiimuvi ezisibonisa olo khetho.
Nguwuphi umgangatho uMovistar + Lite abonelela ngawo
Yonke imixholo ekhoyo kwiqonga levidiyo iMovistar yokusasaza yile iyafumaneka ngo-720pIsisombululo esifanelekileyo xa sisithelekisa nomgangatho onikezelwa lolona khuphiswano luthe ngqo njengeNetflix (4k) kunye neHBO (1080p). Kodwa ukuba sisebenzisa izixhobo eziphathwayo, izinto ziya zisiba mbi, kuba isisombululo sincitshisiwe saya kwi-576p.
IMovistar + Lite kufanelekile
Ukuba siqala ukuvavanya umxholo okwangoku, onganikwanga yibhola yokuqala yebhola ekhatywayo okanye iChampions League, kunye nexabiso kunye nomgangatho womfanekiso, Le nkonzo intsha ye-Movistar ayisixabisi ngokwenyani.
Ukuba ufuna ukufikelela kwifayile ye- ikhathalogu engapheliyo yothotho INetflix lolona khetho lufanelekileyo (i-7,99 euros ibiza ixabiso eliphantsi). Ukuba ujonge uthotho lomgangatho, i-HBO lolona khetho lufanelekileyo ngelixa iAmazon Prime Video, njengoko ibandakanyiwe kwi-Prime Prime subscription, isimahla kwaye umxholo wayo uya usiba banzi kwaye uphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Iimuvi kunye nothotho » IMovistar + Lite: yonke into ekufuneka uyazi
I-Asus Zenbook 14-Ukuphononongwa kwebhotile encinci enephunga elimnandi
Uyenza njani isalathiso sendlela kwiLizwi